Programming အကြောင်း သိကောင်းစရာ ｜ နည်းပညာဆိုင်ရာ｜May Myanmar Lin Web Development | Web Development Myanmar, Mobile Responsible App Development, Myanmar web design and Web development, Myanmar web app development, Search engine optimization, Software development, Online shopping Platform development
Programming အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Programming ဆိုတာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမိန့်ပေးခိုင်းစေနိုင်တဲ့ အရာတွေလို့ အကြမ်းအနေနဲ့ မှတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ထိတွေ့နေကြတဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ အရာတွေကို ပထမဆုံးလေ့လာကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာဟာ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သောအရာ (Hardware) နဲ့ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ မရနိုင်သောအရာ (Software) တို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Hardware ဆိုတဲ့နေရာမှာ
(1). Input Device များဖြစ်တဲ့
(2). Output Device များဖြစ်တဲ့
နောက်ပြီးတော့ သူတို့တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့
(6). Bus လေးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သိထားရမှာက Hardware မှာ မှတ်ဉာဏ်ပဲရှိပြီးတော့ အသိဉာဏ်မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် (Computer has no Intelligence.) လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာတော့ ကွန်ပျူတာကြီး အသက်ဝင်လာအောင်၊ အလုပ်တွေလုပ်လို့ရအောင် သူ့မှတ်ဉာဏ်ကို အားကိုးပြီး အသိဉာဏ်နဲ့တူတဲ့ Software တွေကို Run ပေးရပါတယ်။ ဒီ Software တွေကြောင့် ကွန်ပျူတာဟာ လုပ်ဆောင်ချက်တေါကို လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး၊ Hardware တွေကို ခိုင်းစေရန်အတွက် Software တွေလိုအပ်လာပါတယ်။
Software ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလွယ်ပြောရရင်တော့ Programming ဘာသာစကားတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ အစုအဝေးတစ်ခုကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Adobe Pagemaker, Photoshop, Office, AutoCAD, etc… အားလုံးကို Software လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ဖြစ်လာအောင် Programming Languages တွေ နဲ့ရေးကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ Programming ဆိုတာ Software ရေးနည်းလို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Instruction/ Command ဆိုပြီး နှစ်ခုပါတယ်။
5 နဲ့4ပေါင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဖော်ပြပါမယ်။
အရှင်းလင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ပြရမယ်ဆိုရင်5+4လို့ရေးနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ5နဲ့4က Data ဖြစ်ပြီး (+) က Instruction / Command ဖြစ်ပါတယ်။
Programming Language တွေများစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေခံသဘောတရားတွေကတော့ အားလုံးအတူတူပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Programming Language ကို အခြေခံအားဖြင့်တော့ (၃) မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
3. High-Level Languages တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာ “0” ရယ် “1” ရယ်နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ စက်အတွက် ရေးတဲ့စာလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးအနေနဲ့တော့ နားလည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စက်တစ်လုံးအပေါ်မှာတော့ အပြည့်အဝနားလည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Assembly Languages မှာတော့ လူက 30% လောက်နားလည်လာပြီး စက်ကလည်း 70% လောက် နားလည်လာပါပြီ။ Assembly Languages မှာ Data တွေရှိမယ်၊ Instruction / Command တွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 10 + 20 = 30 ဆိုတာမျိုးပါ။ 10, 20, 30 က Data တွေဖြစ်ပြီး၊ + နဲ့ = က Instruction / Command တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စက်ကို ဒီအတိုင်းသွားရေးပြမယ်ဆိုရင် သူကမသိနိုင်ပါဘူး။ သူက0နဲ့ 1 နှစ်ခုပဲသိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဘာသာပြန် (Compile) လုပ်ပေးရတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှ Machine Language ဖြစ်သွားပြီး စက်မှ Run လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Compile ဆိုတာ ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Assembly Language ကနေ Machine Language ကိုပြောင်းပေးတာကို Compile လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ နာမည်အနေနဲ့ Assembler လို့ခေါ်ပါတယ်။
High-Level Languages မှာတော့ လူတွေက 100% ကို နားလည်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကိုလည်း နားလည်အောင် Compile လုပ်လို့ အဆင်ပြေသွားပြီးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ High-Level မှာလည်း Data တွေ Instruction / Command တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ Program တစ်ခုရေးပြီးလို့ စက်နားလည်အောင် Compile လုပ်ပေးရင် သူ့ကို နာမည်အနေနဲ့ Compiler လို့ခေါ်ပါတယ်။
Programming Language များအကြောင်း
Programming Language တွေများစွာဟာ ယခင်အချိန်များစွာကတည်းက ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့ သဘောတရားအရ အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငုတ်လျှိုးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ Language တွေရှိခဲ့သလို၊ အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Language တွေကြောင့်လဲ Programming Language တွေဟာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Programming Language တွေအကြောင်းကို အစအဆုံးတခုချင်းစီ လေ့လာနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပေမယ့် နာမည်ကျော်ကြားပြီး၊ လူသိများတဲ့ Programming Language တွေအကြောင်းကိုတော့ History များနဲ့အတူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်က ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ C Programming Language ဟာ Programming လောကအတွက် ခိုင်မာတဲ့ အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာလောကအပေါ်မှာလည်း များစွာအကျိုးပြုခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိအချိန်ထိ အသုံးပြုနေဆဲ Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ C ကို ၁၉၆၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၇၃ ခုနျစ်အတွင်း Dennis Ritchie က Bell Telephone Laboratories မှာ Unix Operating System အတွက် ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ C ရဲ့နောက်ဆုံး Stable Release ကတော့ C 11 ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာ ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
C++ အကြောင်းကိုတော့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအများစု ကြားဖူးနားဝတော့ အနည်းဆုံး ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ C++ ဟာ Programming Language လောကအတါင်းမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိအချိန်ထိ အသုံးပြုနေဆဲ Language တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ C++ ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ပေါ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ C++ ရဲ့ Developer ကတော့ Bjarne Stroustrup ဖြစ်ပါတယ်။ Bell Telephone Laboratories ဟာ နည်းပညာလောကအတွက် အောင်မြေတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပြီး C++ ကိုလည်း အဆိုပါနေရာကနေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft ရဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ C# ကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာစတင် Develop လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ C# ရဲ့ Stable Release ကတော့ 4.0 ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အချိန်က ဖြန့်ချိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လအချိန်ကတော့ Beta Release 5.0 ကိုထပ်မံ ဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်။ Windows Application တွေရေးသားရာမှာ များစွာလွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Perl ဟာလည်း C-Base Programming Language တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Perl ရဲ့ Developer ကတော့ Larry Wall ဖြစ်ပါတယ်။ Scripting Language တစ်ခုဖြစ်ပြီး System Administration, Text Processing နဲ့ Web Server အတွက် လုပ်ငန်းတာဝန်ပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုမှု များပါတယ်။ Perl ရဲ့ Stable Release ကတော့ 5.16.0 ဖြစ်ပြီး Preview Release ကတော့ 5.17.1 ဖြစ်ပါတယ်။
Java ကတော့ Programming Language တွေထဲမှာ လက်ရှိအောင်မြင်မှုမြင့်မားနေတဲ့ Language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Windows Application, Web Application တွေနဲ့ Mobile Application တွေကို ရေးသားနိုင်တဲ့ Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Java ရဲ့ Developer ကတော့ Games Gosling ဖြစ်ပြီး၊ Sun Microsystems ကဖြစ်ပါတယ်။ Java ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အသုံးပြုသူတွေထံကို ချပြခဲ့တာကတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အရောက်မှသာဖြစ်ပါတယ်။ Java ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ Programming လောကအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုများစွာ ရှိခဲ့ပြီး၊ Android Application တွေကို Java နဲ့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
PHP ကတော့ Web ပိုင်းမှာ အလွန်ကို အောင်မြင်နေတဲ့ Server-Side HTML Scripting Language အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ PHP ကိုတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က Rasmus Lerdorf ကစတင် Develop ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ PHP ရဲ့ Stable Release ကတော့ 5.4.4 ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့ ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Dynamic Web Page တွေကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အကောင်းမွန်ဆုံး Scripting Language ဖြစ်တဲ့အတွက် Web Developer အများစု အသုံးပြုတဲ့ Language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Python ကိုတော့ သိကျွမ်းသူအနည်းသာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Python ဟာလည်း စွမ်းအားမြင့်မာတဲ့ Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ High Level Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Python ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ Python ရဲ့ Designer ကတော့ Guido Van Rossum ဖြစ်ပါတယ်။ Google Application Engine မှာ ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် လူသိများပါတယ်။
Microsoft ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့တင် VB ဟာ ဘယ်လောက် Strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ စတင် Develop ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ VB ဟာဆိုရင် သက်တမ်းအရ ၁၉ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ VB ဟာ Microsoft ရဲ့ Office Application ရေးသားမှုတွေကို အဓိကထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ VB ကို Virus code တွေ ရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်း အသုံးပြုမှုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ VB ရဲ့ Stable Release ကိုတော့ Office 2012 ထွက်ရှိစဉ်က၊ တစ်ပြိုင်နက်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ Version 7.0 ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်က ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ Pascal ဟာလည်း သူ့အချိန်အခါက အောင်မြင်တဲ့ Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Pascal ရဲ့ Developer ကတော့ Niklaus Wirth ဖြစ်ပါတယ်။ Pascal ဟာ ပြင်သစ်သင်္ချာပညာရှင် Blaise Pascal ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Pascal အသုံးပြုထားတဲ့ Application တွေကို လက်ရှိအချိန်ထိ အသုံးပြုနေရဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Pascal ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက Strong & Safe Programming Language လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Ruby ဟာ Japan နိုင်ငံကနေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ Programming Language အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Ruby ရဲ့ Designer ကတော့ Yukihiro Matsumoto ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ruby ရဲ့ Stable Release ကတော့ 1.9.3-p194 ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၀) ရက်နေ့က Release ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dynamic အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ OOP Language အမျိုးအစားတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှဒေသမှ Develop ပြုလုပ်တဲ့ Programming တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အနာဂတ်ကာလမှာ အလားအလာကောင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Go Programming Language ကတော့ Google Inc. ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Designer ကတော့ Robert Griesemer, Rob Pike, Ken Thompson တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Go ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်းကမှ စတင်ကြော်ငြာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးအစားကတော့ Static ဖြစ်ပါတယ်။ Strong ဖြစ်ပြီး၊ File Name အနေနဲ့တော့ .go ကို အသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်။ Go ရဲ့ Stable Version ကတော့ 1.0.2 ကိုသာ ရောက်ရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Lynx Programming Language ကတော့ ကြီးမားပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ Network တွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ Lynx ကိုတော့ University of Wisconsin-Madison က ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ စတင် Develop ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Lynx ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Charlotte Multicomputer Operating System အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Formula Calculator ရဲ့ ဦးဆုံး စာလုံးတွေကို မျှတစွာရယူထားတဲ့ FOCAL Programming Language ဟာ အခြေခံကျတဲ့ Programming Language အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ FOCAL ကို ဖန်တီးမှုတွေထဲမှာ အများဆုံးပါဝင်တာကတော့ Richard Merrill ဖြစ်ပါတယ်။ FOCAL ဟာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကတည်းက Develop စတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပြီး၊ ရှေးပိုင်းကျတဲ့ Language အမျိုးအစားတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Integrated Development Environment များအကြောင်းသိကောင်းစရာ
IDE လို့ အသိများတဲ့ Integrated Development Environment တွေဟာ Programmer တွေအတွက် အဓိကနေရာကနေ အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ IDE တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ Language တွေအလိုက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ Microsoft ရဲ့ Visual Studio လိုမျိုး IDE တွေဟာဆိုရင် Coding တစ်ကြောင်းမှ ရေးစရာမလိုဘဲ Web Login Page တွေ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိ ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ IDE တစ်ခုမှာ အခြေခံအားဖြင့် ပါဝင်တာကတော့
3. A Debugger တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော IDE တွေမှာတော့ Compiler, Interpreter တို့ပါဝင်လာပြီး၊ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ Visual Studio ကိုပဲ ထပ်မံညွှန်းဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IDE တွေရဲ့အစပိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Command Based Application များကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖက်အချိန်ကာလကို ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ IDE အများစုကို မြင်တွေ့နိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ နာမည်ကြီးပြီး လူသိများတဲ့ IDE တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Eclipse ကတော့ Free and Open Source Software Community ကနေ Develop ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ Software Development Type ဖြစ်ပါတယ်။ Java အတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပေမယ့်၊ Plug-in ထည့်သွင်း အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အခြား Language တွေများစွာကိုပါ Support ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cross Platform အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Microsoft Windows,, Mac OS, Solaris, Linux တို့မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Eclipse ရဲ့ Stable Release ကတော့ 3.7.2 Indigo ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့က ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Eclipse ဟာ Plug-in ထည့်သွင်းအသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ C, C++, COBOL, Haskell, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Scala, Ada, Clojure, Groovy နဲ့ Scheme တို့ကိုပါ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Eclipse SDK ဟာ Free and Open Source Software အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
WinDev ကို PCsoft က ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Version 17 ကို ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WinDev ကိုတော့ Microsoft Windows ပေါ်မှာသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ Visual Basic, Java နဲ့ C# တို့ကို Support ပေးထားပါတယ်။ အခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ပါဝင်လာတာကတော့ WebDev ဖြစ်ပြီး Web Application များ Web Site များရေးဆွဲရာမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ WinDev ကတော့ 4GL (Fourth Generation Language) ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Apple အသုံးပြုသူအများစု ရင်းနှီးမယ့် နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Apple Inc. ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Stable Release ကတော့ 4.3.3 (4E3002) ဖြစ်ပါတယ်။ Developer Preview အနေနဲ့တော့ 4.5 ကိုထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့က ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ Xcode ဟာ Apple ရဲ့ Mac OS & iOS Application တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ IDE အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Mac OS အမျိုးအစားတစ်ခုထဲမှာသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Xcode မှာ Interface Builder ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ IDE အမျိုးအစားတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Xcode ရဲ့ Support ပေးတဲ့ Language တွေကတော့ C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java, AppleScript, Python, Ruby တို့ကို အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။
Programming ဘာသာရပ်တွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှာ အလုပ်အကိုင်နေရာ အခွင့်အလမ်း များပြားတဲ့အတွက် လူငယ်အများစု စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Programming ဘာသာရပ်မှာလည်း လေ့လာသင်ယူစရာလမ်းကြောင်းတွေ ကွဲပြားသွားပြီး အခြေခံအားဖြင့် Mobile Developer, Web Developer, Software Programmer လို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအနေနဲ့ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Application တွေကို ရေးသားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အောင်မြင်မှုပမာဏကြီးမားနေတဲ့ Android အတွက် Application တွေကို ရေးသားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Java Programming Language ကိုလေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Developer တစ်ဦးဖြစ်ဖို့အတွက် အချိန်ကာလအနေနဲ့တော့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအလိုက် အချိန်ကာလ (၆) လကနေ (၉) လအတွင်း ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်အများစု စိတ်ကူးယဉ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Programmer တစ်ဦးအနေနဲ့ ဖိအားတွေကို သင်တန်းမှာကတည်းက စတင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ များစွာလှသော Programming Language တွေထဲက အားသန်ရာ Language တစ်ခုကို တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Programming Language တွေအနေနဲ့ အချို့ကို ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင် C++, C#, Java, Python, Perl, VB အစရှိတဲ့ Language တွေအကြောင်းနဲ့ Programming Concept တွေအကြောင်းကို သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Programmer တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လိုတဲ့ လူငယ်များအတွက်တော့ အချိန်ကာလတစ်ခုကို ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။